Gamescom 2022 pane saiti: kudzoka muCologne - Spielpunkt - mitambo yebhodhi nemitambo yemavhidhiyo
Yakatumirwa ne Andre Volkman | Kurume 10, 2022 | Gamescom muCologne, nhau, Vhidhiyo mitambo
Gamescom 2022 ichaitika muCologne, varongi vakazivisa hurongwa hwavo, hunogona kunyatsoshanda gore rino. Denda rekorona rakambodzikisira mutambo wevhidhiyo kakawanda uye raida kuti varongi vatsvage nzira dzekugadzira dzekuzviita. Gamescom haina kukanzurwa, asi chiitiko chakatamiswa zvachose kuInternet. Muna 2022, chiitiko ichi chichava zvakare mutambo wepa-saiti.
Iyo yakasarudzika yemitambo yekunzwa yeGamescom yadzoka: chiitiko chikuru chepasirese kune zvese zvine chekuita nekombuta nemavhidhiyo mitambo uye yeEurope inotungamira bhizinesi chikuva cheindasitiri yemitambo ichaitika zvakare mudzimba dzekuratidzira dzeCologne kubva Nyamavhuvhu 24 kusvika 28. Chiitiko chepa-saiti chinosanganiswa nechirongwa chakakura chedhijitari. Kune Gamescom 2022, pfungwa yehutsanana uye yekuchengetedza yakaedzwa uye yakaedzwa neKoelnmesse ichashandiswa, iyo inogara ichienderana nemitemo yose yepamutemo iripo uye iyo ichaitawo kuti kuchengeteka uye kugara kwepamusoro. Matanho anoitwa akadai sekuvandudza manejimendi ekubvumidzwa, dhijitari queue manejimendi, yakawedzera-yakapamhama nzira kana mashoma etiketi contingents.
Zvakare zvitsva gore rino i "Gamescom inofamba yakasvibirira" chirongwa, iyo Gamescom yose ichaitwa mamiriro ekunze-asina kwaakarerekera munguva yepakati uye kwenguva refu nekuderedza uye kudzivirira kubudiswa kwe CO2 uye munguva pfupi kuburikidza ne CO2 offsetting.
Gamescom 2022 inosanganisira zvinotevera pa-saiti uye online zvinopihwa:
nzvimbo yevaraidzo, nzvimbo yebhizinesi nedzimwe nzvimbo, kusanganisira yecosplay, retro uye indie mafeni, ine yakasarudzika mutambo wekunzwa kweGamescom pane saiti.
Gamescom inoratidza senge Gamescom: Kuvhura Night Live, Gamescom studios uye Gamescom: Awesome Indies ine vateereri vepamhepo pasaiti pamwe nenzizi dzakatepfenyurwa pamatashi akawanda.
Bundled Gamescom zvirimo paGamescom izvozvi
Interactive quotes pane ese Gamescom chiteshi uye inoyevedza mibairo sechikamu che Gamescom EPIX
Kudyidzana kwakawanda nevagadziri vepasirese uye vezvenhau vanobatana
Felix Falk, Maneja Director wemutambo - Sangano reGerman Games Indasitiri: "Vese mafani eGamescom nevadyidzani vanga vakamirira izvi kwemakore maviri: Gamescom yave kudzoka kudzimba dzekuratidzira dzeCologne uye pamwe nemutambo wakasarudzika wekunzwa kuti isu tese tinoda. akapotsa zvakawanda. Gore rino tiri kusanganisa akanakisa epasirese: yedu yakakura dhijitari chirongwa neisingaenzaniswi Gamescom chiitiko pane saiti. Gamescom ichaisa miitiro mitsva zvakare muna 2022, semuenzaniso maererano nekusimbaradzika: Neyedu 'Gamescom inoenda girini' chirongwa, tichaita Gamescom chiitiko chinonyanya kuenderana nemamiriro ekunze pamwe nevashanyi nevaratidzi. Mukuita izvi, hatidi chete kuve mucherechedzo wezvirongwa zvakawanda zvekuchengetedzwa kwemhoteredzo nemamiriro ekunze muindasitiri yemitambo yepasi rose, asiwo piyona wezviitiko zvepasi rose. "
Oliver Frese, COO uye Maneja Director weKoelnmesse: "Takazodzoka neGamescom - muCologne uye online! Uye neinogutsa tailwind kubva kumitambo indasitiri. Izvozvo zvinondifadza zvikuru. Pamwe chete takaisa pfungwa yakasimba, mukati mehurongwa hwatinovimbisawo kuchengetedzeka, hutano uye kugara zvakanaka kwemunhu wese aripo." Frese arikutarisira zvakafanana kuGamescom inoenda kugirinhi chirongwa: "Isu kuKoelnmesse tagara kwenguva refu. kushanda pakuunza zviitiko zvedu zvehupfumi mukuenzanisa nenzanga uye zvakatipoteredza. Ndizvo zvinotitungamirira.” Zvakanaka kuva nemudiwa akasimba semutambo uri parutivi pako, pamwe chete nevaratidziri nevashanyi. Nokuti zvinongoshanda pamwe chete: “Munhu wose anofanira kupa mupiro wake. NeGamescom inoenda mutyairi wegirini, isu tave kutungamira kana zvasvika kune mamiriro ekunze-ane hushamwari kutengeserana fairs - pasi rese!
Makambani anofarira zvino anogona kunyoresa kutora chikamu kwavo pa Gamescom.global/take-part unganidza uye bhuku zvakananga.
Gamescom inoenda girini: Kutora mutoro wekudzivirira kwemamiriro ekunze pamwechete
Kuchengetedza kwezvakatipoteredza uye mamiriro ekunze kunoita basa rakakosha muindasitiri yemitambo. Vangave vagadziri vemitambo kana vatsikisi, (eSports) varongi, masangano edzidzo kana vanopa masevhisi kubva kuchikamu chemitambo: vese vagara vachiziva kurumidziro yenyaya. Vanoronga veGamescom vanozivawo nezvebasa ravo rekuchengetedza mamiriro ekunze uye saka vatanga "Gamescom inoenda girini".
Kuvaka pamatanho aripo - akadai sematikiti emahara ekutakura veruzhinji kana sango reGamescom - Koelnmesse nemutambo-Verband vanoda kuita Gamescom semamiriro ekunze-asina kwazvakarerekera munguva yepakati uye kwenguva refu nekudzikisa, kudzivirira uye kumisa kuburitswa kweCO2. Munguva pfupi uye sepurojekiti yekuyedza, Gamescom 2022 ichave yakatonyanya kuenderana nemamiriro ekunze pamwe nembiru nhatu:
Chiitiko chikuru nenzvimbo dzese dzinotarisirwa neKoelnmesse nemutambo-Verband (kusanganisira nzvimbo yekuratidzira, nzvimbo dzine themed, vashandi uye kufamba) ichave isina kwayakarerekera kwemamiriro ekunze mukubatana neClimatePartner. Koelnmesse pamwe nesangano remutambo vanodzima kuburitswa kweCO2 kwakaverengerwa kuburikidza nemapurojekiti maviri ekudzivirira mamiriro ekunze: chirongwa chesimba remhepo kuchamhembe-kumabvazuva kweBrazil uye zvitofu zvekubikira zvakachena muAbuja, Nigeria.
vaenzi inogona kuita mupiro wekuzvidira kuchengetedzwa kwemamiriro ekunze nekupa mupiro kana kutenga "green ticket". Mari iyi inobatsira sango reGamescom padhuze neBayreuth, iro rakatanga muna 2020 uye rakatokura kusvika pamakumi maviri ezviuru.
exhibitor inogona kuita mupiro unokurudzirwa kune kuchengetedzwa kwemamiriro ekunze zvichienderana nehukuru hwekumira. Izvi zvinotsigirawo mapurojekiti ekudzivirira mamiriro ekunze akasarudzwa pamwe chete neGamescom neClimatePartner.
Rumwe ruzivo nezve Gamescom inoenda girini inogona kuwanikwa pa Gamescom.de/Gamescom-goes-green.
Kekutanga, varongi veGamescom vari kushanda neClimatePartner kuverenga maemissions anogadzirwa panguva yeGamescom musimboti chiitiko uye muripo unotevera. ClimatePartner mupi wemhinduro mukudzivirira kwemamiriro ekunze kumakambani uye inosanganisa zano remunhu ne cloud-based software iro rakasiyana pamusika. Vatengi vanogona kuishandisa kuverenga uye kuderedza CO2 emissions uye kugadzirisa iyo yasara kubuda. Nenzira iyi, zvigadzirwa uye makambani anove asina kwaakarerekera emamiriro ekunze, izvo ClimatePartner label inosimbisa.
Susanne Wöllecke, Musoro weKutengesa Germany kuClimatePartner, anoona Gamescom semumwe wevakatanga mubhizimusi rekutengeserana: "Kudzivirirwa kwemamiriro ekunze nguva dzose kunosanganisira matanho akafanana: verenga yako CO2 emissions, ideredze uye gadzirisa yakasara CO2 emissions. Iyo Chiitiko Carbon Footprint yeGamescom inoshanda sehwaro hwekudzikisa matanho. Kubuda kweCO2 kwasara kunodzikiswa nemapurojekiti ekudzivirira mamiriro ekunze. Mucherechedzo zvakare kuti Gamescom inonyevenutsa varatidziri nevashanyi kune nyaya yekuchengetedzwa kwemamiriro ekunze uye inopa mukana wekupinda mupiro wekuchengetedza mamiriro ekunze. "
Kare Kuburitswa kwaMambo Arthur: Knight's Tale yakamiswa
Inotevera Star Wars Villainous yakaziviswa
Advent Karenda 2021 - Makwikwi: Tora chikamu mazuva ese
Zvemahara zvemukati zveMonster Hunter: Rise iri kuuya
Prime Vhidhiyo Yekutanga: Amazon inounza anopfuura makumi maviri matsva akateedzana mukugadzira
"Funga seViking": New CGI yeAssassin's Creed: Valhalla